Dagaallo ka socda Galmudug xilli Qoor-Qoor dibad-joog noqday | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaallo ka socda Galmudug xilli Qoor-Qoor dibad-joog noqday
Ciidanka ayaa 15 xubnood oo Al-Shabaab ku dilay shalay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Guriceel.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Ciidamada dowladda iyo kuwa Maamulka Galmudug ayaa iska kaashanaya howgallo Kooxda Al-Shabaab looga saarayo degaanno ku yaalla Galgaduud.
Howlgallada ayaa xoogooda waxay ka socdaan inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Guriceel, halkaasoo shalay lagu dilay 15 xubin oo katirsan Kooxda Al-Shabaab, waxaana lagu qabto hub iyo dagaalyahanno nool.
Al-Shabaab ayaa jab lagu gaarsiiyay dagaalka, inkastoo Kooxda ay sameynayso dhabar-jebin kadib markii gobolka Mudug ay ku xoojisay weerarada, iyadoo halkaasi ku qabsatay dhowr degaan bishii lasoo dhaafay, waxaana jiray weerar xulus oo ka dhacay Wisil.
Waxay dhacayaan dagaallada iyo weerarada Al-Shabaab xili Qoor-Qoor isaga damaashaadayay Muqdisho, oo Galmudug sidii loo doortay intii uu joogay aan dhameyn labo bilood, wuxuu noqday dibad-joog iyo Farmaajo kaal-kaal.
Markastoo soo iftiinta rajada shacabka Galmudug, waxaa xumaada hogaamiyaha, oo noqdo mid safaradiisu badan yihiin, shaqadiisa gudaha aad u yar tahay, oo amarada uu ku shaqeeyo uga yimaada Villa Somalia.
Qoor-qoor wuxuu Hal-hayskii uu doorashadda kusoo galay ahaa 'Waayo-arag isku wadi kara', taasoo hadda noqotay Guul-wade dallaal u noqon kara Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, isagoo loo adeegsado meelaha danaha gaarka ka leeyihiin, sida dadka ay ku eedeeyaan.